Fitsaboana ny covid-19 - Mila ôksizena 16 hatramin’ny 20 litatra ny marary iray • AoRaha
Betsaka ny filàna ôksizena ho an’ireo mararin’ny Covid-19 manana fahasarotana. Mahatratra 16 hatramin’ny 20 litatra ny fatra ilain’ny marary iray, araka ny nambaran’ny mpandrindra ny Ivon-toerana mitsabo ny Covid-19 (CTC-19) Mahamasina. Marary mampiseho fahasarotana dimy amby roapolo amin’ireo efapolo amby zato tonga eny amin’ny CTC no raisin’ ity ivon-toerana ity mandra-pahitana ny toerana eny amin’ ny hopitaly.
“Avo roa heny ny “concentrateur d’oxygène” satria mila 16 hatramin’ny 20 litatra ny marary iray. Noho izany, raha manana an’ireo milina famatrarana ôksizena roanjato izahay dia lasa fandriana zato ihany no misy an’io fitaovana io. Ny fandriana misy fa horaisina ve ilay olona dia ho sempotra eo”, hoy ny jeneraly Rasamimanana Lysias, mpandrindra ny CTC-19 Mahamasina. Tsiahivina fa vao nahatonga ireo milina famatrarana ôksizena roa arivo isa isika, afak’omaly, hanampy ireo efa miasa eny amin’ny toerampitsaboana.
An-kilany, nitombo be ny marary manana fahasarotana tao anatin’ny 24 ora. Raha ny tatitra ofisialy momba ny Covid-19 eto Madagasikara, omaly dia nahatratra telo amby sivifolo sy efajato ireo marary ao anaty fahasarotana, valo amby sivifolo sy telonjato kosa tamin’ny alarobia, izany hoe nitombo dimy amby sivifolo izany ireo marary tao anatin’ny iray andro.
Fanefitry ny valanaretina :: Ho maimaim-poana ny vaksiny miaro amin’ny Covid-19